Ra’iisul Wasaare Rooble oo Warbixin ka dhageystay Guddiga qabanqaabada todobaadka Xoriyadda – Radio Daljir
Ra’iisul Wasaare Rooble oo Warbixin ka dhageystay Guddiga qabanqaabada todobaadka Xoriyadda
Juunyo 15, 2021 5:01 g 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa warbixin ka dhageystay Guddiga qabanqaabada Munaasabadaha Maalmaha Xorriyadda isagoo kula dardaarmay in ay dardar geliyaan howsha loo xilsaaray.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Guddiga qabanqaabada maalmaha xoriyadda ee 26ka June iyo 1da Luulyo Mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa Warbaahinta u sheegay in shirkii maanta ay Ra’iisul Wasaaraha Daka Mudane Maxamed Xuseen Rooble uga warbixiyeen howlaha la xiriirta todobaadka xoriyadda iyo shaqooyinka u qabsoomay.
Wasiirka ayaa tilmaamay in Guddiga uu kal hore sameystay guddi hoosaadyo, kala ah guddiga Amniga, Guddiga hab-maamuuska, Guddiga Warbaahinta iyo wacyigelinta, Guddiga bilicda iyo qurxinta, Guddiga isboortiga iyo guddiyo kale.
“Ra’iisul Wasaaraha markii aan warbixinta siinay waxa uu soo dhaweeyay oo uu amaanay shaqada Guddiga ay qabteen muddada yar ee ay jireen, waxaana uu kula dar daarmay inay sii labo laabaan shaqada ay hayaan, maadaama uu waqtiga yar yahay”. Ayuu yiri Wasiir Dubbe.
Madaxweynaha Puntland oo xariga ka jaray Wajiga labaad ee dhismaha Garoonka Ciyaaraha Garoowe (Sawiro)
Madaxweynaha Hiirshabeele oo la kulmay safiirka taliyaaniga ee Soomaaliya